Nhau - 4 nzira dzekubaya kugona kwedata uye kurishandisa kunatsiridza hutano nenharaunda
Kudzoka apo Bill Gardner akabatana nebasa remoto munzvimbo iyoyo-yekumaruwa Texas, akauya achida kuita musiyano wakanaka. Nhasi, semukuru pamudyandigere moto mukuru, anozvipira muridzi wemoto uye mukuru mukuru wezvigadzirwa zvemoto zveESO, anoona izvo zvishuwo muzera razvino-uye-rinouya, zvakare. Pamusoro pekufona kwekushandira, vanounza kudiwa kwekunzwisisa kuti zvavanoita zvinokanganisa sei dhipatimendi ravo uye zvinangwa. Ivo vanoda kuziva iwo maitiro avari kuita, kwete chete kuburikidza nekuzadzikiswa kwavo uye magamba nyaya, asi neinotonhora, yakaoma data.
Kuchengeta data pazviitiko zvakaita semoto wekicheni kunogona kubatsira kumisikidza zvakakosha zvekudzidzisa munharaunda. (mufananidzo / Getty)
Madhipatimendi mazhinji anotora ruzivo nezve zviitiko zvemoto uye mhinduro, murwi wemoto uye vanhuwo zvavo, uye kurasikirwa kwepfuma kuzivisa National Moto Chiitiko Kuzivisa System. Ruzivo urwu rwunogona kuvabatsira kuteedzera nekugadzirisa zvishandiso, kunyora yakazara izere yechiitiko chebazi uye kupembedza mabhajeti. Asi nekuunganidza data kupfuura NFIRS zviyero, vamiririri vanogona kuwana dura repfuma rechokwadi-renguva nzwisiso yekuzivisa kuita sarudzo uye kubatsira kuchengetedza vanodzima moto, vagari uye zvivakwa zvakachengeteka.
Zvinoenderana ne 2017 Yenyika Moto Data Ongororo, data "muunganidzwa wakura zvakanyanya kupfuura data rezviitiko uye nzira yakazara yekubatanidza dhata rese remabasa emoto inodiwa kuti uve nechokwadi chekuti madhipatimendi emoto anoshanda nedatha iyo inonyatso tsanangura mufananidzo wezviitiko zvavo."
Gardner anotenda kuti data rakaunganidzwa neEMS uye vamiririri vemoto vane kukosha kwakakosha uko kunoramba kusiri kubatika.
"Ndinofunga kwemakore, takave neruzivo uye kwaive kufunga kwehuipi hwakakosha kuti mumwe munhu aida ruzivo irworwo, kana kuti zvaidikanwa kuti zviitwe chimwe chikonzero chekuvapo kwedu," akadaro. "Asi chaizvo, zvinodiwa kuti titungamire zvatinofanirwa kunge tichiita uye nekunongedza kwatingaende kunhengo yega yega."
Hedzino nzira ina idzo moto uye EMS masangano vanogona kuisa yavo data kushandisa:
1. KUFANANA NENGOZI
Njodzi chikamu chakakura, uye kuti unzwisise njodzi chaiyo kunharaunda, madhipatimendi emoto anofanirwa kunge achiunganidza data rinovabatsira kupindura mibvunzo yakaita seiyi:
Pane zvivakwa zvingani munzvimbo kana munharaunda?
Chii chivakwa chakagadzirwa?
Ndezvipi zvinhu zvine njodzi zvinochengetwa imomo?
Chii chinowanikwa mvura kune icho chivakwa?
Ndeipi nguva yekupindura?
Yakapedzisira kuongororwa riini uye kutyorwa kwakagadziriswa here?
Izvo zvivakwa zvine makore mangani?
Vangani vane masisitimu ekudzvinyirira moto akaiswa?
Kuve nerudzi urwu rwe data kunobatsira madhipatimendi kuongorora kuti ndedzipi njodzi dziripo kuti vagone kugovera zviwanikwa zvinoenderana uye nekuisa pamberi nzira dzekudzora, kusanganisira dzidzo yemunharaunda.
Semuenzaniso, data rinogona kuratidza kuti kubva pamishumo yemoto zana pagore, makumi maviri acho ari kushanda moto - uye pane iwo makumi maviri, gumi nemaviri ari emumba. Pamoto wepamba, masere anotangira mukicheni. Kuve neiyi granular dhata kunobatsira madhipatimendi zero mukudzivirira moto wekicheni, izvo zvingangoita ruzhinji rwekurasikirwa kwemoto munharaunda.
Izvi zvinobatsira kutsigira mashandisiro emuchina wekudzimisa moto kuti ushandiswe pakudzidzisa munharaunda uye, zvakanyanya kukosha, dzidziso yemunharaunda yaizodzora zvakanyanya njodzi yemoto wekicheni.
"Kana iwe ukadzidzisa nharaunda kushandisa uye nguva yekudzimisa moto," akadaro Gardner, "ichachinja zvachose njodzi pamwe nemari inobatanidzwa munharaunda menyu."
2. KURUDZIRA KUREZEKA KWEMUDZIMI
Kuunganidza dhata rezvivakwa pamusoro pemamiriro emoto hakungobatsira chete nekuchengetedza moto wekudzima moto nekurega vashandi vachiziva kana paine zvinhu zvine njodzi zvakachengetwa panzvimbo, zvinogona zvakare kubatsira vanodzima moto kuti vanzwisise kuratidzwa kwavo kumakemikari.
“Mazuva ese, vanodzima moto vanopindura kumoto urikupa zvinhu zvatinoziva kuti zvine hutachiona. Tinoziva zvakare kuti vanodzima moto vane huwandu hwakakwira mune mamwe marudzi egomarara kupfuura huwandu hwevanhu, ”akadaro Gardner. "Dhata yakatibatsira kuenzanisa huwandu hwegomarara hwakawedzera nekuratidzwa kune izvi zvigadzirwa."
Kuunganidza iyo data kune wese muridzi wemoto kwakakosha kuti uve nechokwadi chekuti vanodzima moto vane maturusi avanoda kudzikisa kusvibiswa uye kusvibiswa zvakachengeteka, pamwe nekugadzirisa chero ramangwana rezvehutano rinosangana neicho chiitiko.
3. KUSANGANISA ZVINODIWA ZVEMAZIKO AZO
Dhiyabhorosi kukurumidza ndicho chikonzero chakajairika chekufonera EMS. Kune vamiririri vane chirongwa chemunharaunda paramedicine, kushanya nemurwere weshuga kunogona kununura mabhenefiti ayo anowedzera kupfuura kugadzirisa dambudziko rediabetes rakurumidza. Kuve nechokwadi chekuti murwere ane chikafu kana akabatana kune zviwanikwa senge Kudya paMavhiri - uye kuti vane mishonga yavo uye vanoziva kuishandisa - inguva nemari zvakashandiswa zvakanaka.
Kubatsira murwere kubata chirwere chavo cheshuga kunogona zvakare kudzivirira nzendo dzakawanda kuenda kuchimbichimbi kamuri uye kubatsira murwere kunzvenga kudiwa kwedialysis uye mitengo uye maitiro ehupenyu anoenderana nazvo.
"Isu tinonyora kuti takashandisa zviuru zviviri zvemadhora muchirongwa chehutano hwevanhu uye takachengetedza mazana ezviuru zvemadhora mukurapwa," akadaro Gardner. “Asi zvinonyanya kukosha, tinogona kuratidza kuti takakanganisa hupenyu hwemumwe munhu uye hupenyu hwemhuri yavo. Zvakakosha kuratidza kuti tinoita musiyano. ”
4. KUUDZA NYAYA YEMAHARA YENYU
Kuunganidza uye kuongorora EMS nedhipatimendi remoto zvinokutendera kuti utaure zviri nyore kuNFIRS, ruramisa mashandisirwo emari kana kugovera zviwanikwa, uye zvakare zvakakosha kuti utaure nyaya yesangano. Kuratidzira kukanganisa kwesangano munharaunda, zvese nekuda kwekunze senge rubatsiro rwemari uye kupihwa bhajeti, uye nechomukati kuratidza vanodzima moto kuti vari kuita mutsauko munharaunda ndizvo zvinozoendesa vamiririri padanho rinotevera.
"Tinofanira kukwanisa kutora dhata rezviitiko uye toti heano manhamba atinowana, asi zvakanyanya kukosha, heino huwandu hwevanhu vanobva kuzviitiko zvatakabatsira," akadaro Gardner. "Heino huwandu hwevanhu munharaunda medu avo, panguva yavo yakaipisisa, isu tanga tiripo kuti tiite mutsauko kwavari, uye takakwanisa kuvachengeta munharaunda."
Sezvo maturusi ekuunganidza data shanduka mune zvese zviri nyore zvekushandisa uye kusanzwisisika uye chizvarwa chitsva chinopinda muchiitiko chemoto chave kutonzwisisa kuwanikwa kuri nyore kwedata, madhipatimendi emoto anowedzera simba re data ravo pachave neese iwo maonero avanoda kuita sarudzo dziri nani uye kugutsikana kukanganisa kwavakaita.